Bilayska Garoowe: “Kufsi Kama Dhicin Kaamka Barakacayaasha Garoowe oo waa Beenabuur” (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 23, 2017 7:15 g 0
Taliska bilayska gobolka Nugaal iyo kuwa magaalada caasumadda ah ee Garowe ayaa maanta oo Arbaco ah soo bandhigay baaris ay wadeen muddo dhawr maalmood ah oo la xiriirtay fal kufsi ahaan loo shaaciyey oo la sheegay in lagula kacay haweenka ka mid ah dadka Barakacayaasha ah ee deggan mid ka mid ah kaamamka Barakacayaasha magaalada Garowe.
Bilayska ayaa shaaciyey falkaasi in uu ahaa mid xaqiiqda ka durugsan, kuna salaysnaa hindise been-buur ah, isla markaana uusan jirin wax kufsi oo dhacay, loona geystay haweenayda sheegtay in fal kufsi ah lagula kacay 22kii bishaan aynu ku jirno ee Agoosto.
Taliye kuxigeenka ciidanka bilayska gobolka Nugaal Ibraahim Maxamed Cabdi iyo Maxamed Muuse Bile oo isna ah taliyaha saldhigga bartamaha ee magaalada Garowe ayaa si wadajir ah arrinkaasi xog-warran gaar ahnuga siiyey Radio Daljir, iyagoo tilmaamay taliyayaashu in falkaasi ay buunbuuniyeen qaar ka mid ah hay’adaha daneeya dadka Barakacayaasha ah.
Taliye kuxigeenka bilayska gobolka Nugaal Ibraahim Maxamed Cabdi waxaa uu dhinaca kale sheegay baaristoodu in ay dhinacyo badan iskugu jirtay, ayna ka qaybgaleen dhakhaatiir caafimaadka ahi, waxaana hadalkiisii uu ahaa sidaan.
Sidoo kale isna arrinkaasi waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga bartamaha ee magaalada caasumadda ah ee Garowe Maxamed Muuse Bile, waxaana uu sheegay saldhig ahaan arrinkaan in ay si dhaw ula soocdeen, ugu dambaynna ay ku guulaysteen hubantida in ay soo bandhigaan, xaqiijiyaanna in uusan jirin wax kufsi ah oo dhacay, uuna ahaa falkaasi mid been ah.
Maqaalo Kale 301 Wararka 20685